Maalmo bilaash ah GIS - 29 iyo 30 ee May 2019 - Geofumadas
Maalmo bilaash ah GIS - 29 iyo 30 ee May 2019
Mee, 2019 Geospatial - GIS
Shirka Free GIS, oo ay soo qabanqaabisay SIG iyo adeega qalab fog (SIGTE) ee Jaamacadda Girona, ayaa lagu qaban doonaa maalmaha 29 iyo 30 bishii May ee Xarunta Dhexe ee Luleerta iyo Turisme.
Inta lagu jiro laba maalmood gudahood waxaa jiri doona barnaamij wanaagsan oo ku saabsan dadka wada hadlaya, wada-xiriirka, waxbarashooyinka iyo seminaarada iyada oo ujeedadu tahay in la helo meel lagu doodo iyo barashada isticmaalka tiknoolajiyada furan oo bilaash ah. Sannadkan waxaan ka sarreeyaa ka qaybgalayaashii 200 ee ka yimid Catalonia iyo sidoo kale dhamaanba Isbaanishka, xoojinta Girona oo ah goob kulan iyo tixraac tixraac ah ee qaybtan takhasuska leh sida GIS lacag la'aan ah.
Shirka ayaa looga golleeyahay inuu ku xiro dadka isticmaala, barnaamijyada, barnaamijyada horumarinta iyo dadka xiiseynaya tiknoolajiyadda ilaha dhaqaalaha ee furan haddii ay ku jiraan suuqa ganacsiga, Jaamacadda ama Maamulka Dadweynaha.
Barnaamijku wuxuu ka kooban yahay soo bandhigyada guud ee Sara Safavi, oo ka socda Shirkadda Waqooyiga Ameerika ee Planet Lab, oo soo bandhigi doona sheeko la yiraahdo "Hello World: Farshaxanada yaryar, Saameyn Ballaaran. Next, Pablo Martínez, oo ka tirsan shirkadda Barcelona 300.000km, ayaa ka hadli doona sidii dib looga fikiri lahaa mustaqbalka magaalada iyada oo loo marayo kartoonka. Ugu dambeyntii, waxay noqon doontaa soo noqoshada Víctor Olaya, horumariye GIS iyo qoraa, kuwaas oo ka hadli doona nidaamka deegaanka ee GIS lacag la'aan ah.
Intaa waxaa dheer, barnaamijku wuxuu isu keenayaa 28 isgaadhsiinta oo loo qaybiyo kalfadal barbar socda oo ka hadlaya mawduucyadan kala duwan sida: xogta furan iyo IDEs, khariidadaha, mashaariicda farsamada gacanta, isticmaalka kiisaska, mashaariicda tacliinta, iwm. Barnaamijka waxaa lagu dhammeystirey 4 tutorials iyo seminaarada 6 oo ka dhici doona maalinta ku xigta qolalka kombiyuutarka ee macalimiinta. Maalinta Maalinta 29 waxaa soo gabagabeyn doona Antonio Rodríguez oo ka socda Xarunta Macluumaadka Qaranka (CNIG) oo ka hadli doona xogta furan ee bulshada furan.
Khariidaynta xafladaha iyo habeenkii habeenkii
Munaasabadda daabacaddan waxaa lagu qaban doonaa xaflad khariidad ah, kulan si wadajir ah uqaybiya meelo kala duwan ee Girona oo leh hadaf gaar ah: Aqoonsiga caqabadaha dhismaha ee magaalada. Ujeedada hawsha waa in la ururiyo xogta laga helo magaalada hore ee Girona ka dibna u diri kartaa OpenStreetMap. In hab madadaalo iyo habab kala duwan ka qaybgalayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay bartaan magaalada iyagoo wada shaqeynaya mashaariicda magaalada.
Post Previous«Previous Bentley Systems ayaa ku dhawaaqay in OpenSite Designer hadda la heli karo
Post Next #BIM - Koorsada Revit-ka Autodesk - fududNext »